China Wrist manohana orinasa sy mpamatsy | qiangjing
Ny voambolana wrist dia manondro lamba tapa-tànana ampiasaina hiarovana ny fantsom-paty. Amin'ny fiaraha-monina ankehitriny, ny mpiaro ny tànana dia iray amin'ireo fitaovana fanatanjahantena ilaina ho an'ny atleta.
Loko: maro loko na azo vakiana
Fampiasa: miaro ny tànana amin'ny ratra, manome fahatsiarovana tsara
Ny voambolana wrist dia manondro lamba tapa-tànana ampiasaina hiarovana ny fantsom-paty. Amin'ny fiaraha-monina ankehitriny, ny mpiaro ny tànana dia iray amin'ireo fitaovana fanatanjahantena ilaina ho an'ny atleta. Ny tànana tànana dia ampahany amin'ny vatana izay ihetsiketsika matetika ny olona ary anisan'ireo faritra marefo indrindra koa. Ny fahafahan'ny atleta tendonitis mitranga amin'ny tànana dia avo. Mba hiarovana azy tsy ho voafitaka na hanasitranana haingana kokoa, ny fanaovana ny fehin-tànana dia iray amin'ireo fomba mahomby.
Ny fanohanan'ny tànana ara-panatanjahantena dia amboarina amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo tokana, izay afaka manamafy ny tapany, hampivoatra ny fitoniana ary manamaivana ny hamafin'ny hateloan-tànana noho ny fanatanjahan-tena maharitra: ny sisin'ny fantsom-baravarana aorian'ny fitsaboana manokana dia mety Mampihena be ny tsy fahampiana mpiaro rehefa manao akanjo, mampihena ny lozam-pifamoivoizana eo anelanelan'ny sisin'ny fantsom-panatanjahantena ara-panatanjahantena sy ny hoditra: Ny endrika fanolorana karazana fananganana tokana dia tsy azo atao fotsiny araka ny filàn'ny tena manokana, fa manome aina ihany koa ny hetsika fanaon'ny knuckles. izay tsy hisy fiantraikany amin'ny hetsika mahazatra amin'ny tanana manontolo.
Ny andraikitra voalohany amin'ny fantsom-tànana dia ny fanomezana tsindry ary mampihena ny fivontosana; ny faharoa dia ny famerana hetsika ary avelao ny tratran'ny naratra indray. Mandritra izany fotoana izany dia tsara kokoa ny tsy manakana ny fiasan'ny tànana mahazatra, ka raha tsy ilaina dia tokony mamela ny hetsiky ny rantsantanana ny ankamaroan'ny tànana.
Ny olona te-hilalao tennis, badminton, tennis de latabatra, rehefa milalao baolina, indrindra rehefa milalao backhand dia handratra ny fehin-tànana, na dia manao dian-tongotra ny elatra aza dia lazain'ny manampahaizana antsika hoe fahita taolan-tavy io. Ary ity wrist tennis ity indrindra dia amin'ny fotoana hikapohana ny baolina, ny tadim-paty dia tsy triatra, ny tadim-bava tsy voahidy, ny hozatra extensor ny famoronana dia voasintona, ka manimba ny tadin-tadiny, ny rantsan-tànana dia tsy voaaro. Mbola misy ny lozabe tafahoatra rehefa mikapoka ny baolina, ka hihabe ny fahasimbana amin'ny tonon-jaza. Ka rehefa milalao tennis, raha mahatsapa fanaintainan'ny satroka ianao dia tsara kokoa ny mitafy braces braces raha manao paroage vita amin'ny elatra. Ary rehefa misafidy ny fantsom-bonao, dia tsy maintsy misafidy ilay tsy manana elastika. Ny elongelika dia tsara loatra ka miaro azy. Ary aza misikina mafy loatra na tsy mivadika loatra, tery loatra ka misy fiantraikany amin'ny rà mandriaka loatra, malemy ary tsy hiaro. Tombontsoa ho an'ny fantsom-pandraisana ara-panatanjahantena: manana elastika be loatra, fofonaina ary fampidirana rano. Misoroka ny ratra miaraka amin'ny fehin-tànana. Hamafiso ny tanjaky ny tànana. Endrika tsara tarehy. Aina. Asehoy tsara ilay fomba fanatanjahantena. Mora sasana. Ho an'ny fahasalamana: famatsiam-bola kely. Tombontsoa be izany. Fampisehoana ho an'ny fantsom-tànana: 1. Ny fehin-tànana dia vita amin'ny lamba elastika avo lenta, izay afaka mifatotra tsara amin'ny tranokala ampiasaina mba hisorohana ny fihenan'ny mari-pana, mampihena ny fanaintainana ao amin'ny faritra voakasik'izany, ary manafaingana ny fanarenana. 2. Mampiroborobo ny mivezivezy amin'ny ra: Mampiroborobo ny fikoriananan'ny rà hozatra ao amin'ny tranokala ampiasaina. Ity fiantraikany ity dia tena mahasoa amin'ny fitsaboana ny arthritis sy ny fanaintainana miaraka. Ankoatr'izay, ny fikorianan'ny rà tsara dia afaka milalao tsara ny fiasan'ny môtô ary mampihena ny fisian'ireo ratra. 3. Vokatry ny fanohanana sy fampiorenana: Ny fantsom-tànan'ny tànana dia afaka manatanjaka ny tonon-taolana sy ligameny hanoherana ny fiantraikan'ny hery ivelany. Miaro tsara ny tonon-taolana sy ny ligamentes.
Andian-teny fanohanana ara-pianarana
Ahoana ny fomba mety hamitana fehin-tànana marina?
Raha mangataka ahy ianao hanoro fitaovana momba ny fiofanana, dia ho an'ny noviavina, ny fehikibo amin'ny fehikibo ary ny tànana.
Androany dia miresaka momba ny fanohanan'ny tànana izahay.
Mihoatra ny 99% ny olona manao fahadisoana amin'ny fiainana andavanandro. Ny fiarovana ny tànana dia tsy vitan'ny fiarovana tsara rehefa tratran'ny lanjany lehibe isika, fa manamafy ny fahamarinan'ny fantsom-pivavahan-tànana koa na amin'ny andro mahazatra. Ny maha-zava-dehibe ny fantsom-pino dia mino aho fa fantatry ny rehetra fa rehefa maratra ny tànana dia tsy azo atao ny fihetsiketsehana fototra. Rehefa manao hetsika mihetsika mifandraika amin'ny taolana avo isika, ny lanja dia ampiharina amin'ny wrist ho fanampiana. Rehefa mampiasa lanja fampiofanana lehibe ianao, na reraka be, ary sarotra ny mifantoka amin'ny fifantohana ara-tsaina, dia mety hivezivezy ny tànana ary tsy azo tazonina. Amin'ny toerana tsy miandany mivaingana, ny tànana vita amin'ny tadin-doha dia mety hitranga raha tsy mitandrina na ny tenosynovitis dia mety hitranga noho ny fahazaran-dratsy maharitra. Raha jerena ny fampiasana bobon-tànana, ny ankamaroan'ny olona dia mametaka ny fantsom-baravarana, ary avy eo dia manodidina ny fehin-tànana amin'ny 3-5, saingy tsy marina izany. Hiresaka momba ny vavahady aho izao: Voalohany, apetaho eo am-baravarana ny ankamatoa, ary avy eo fonosina manodidina ny fototry ny felaka mandra-pofoany ny tànana. Ny fiadiana amin'ny herinaratra mahery vaika kokoa dia tsy mamela ny fantsom-bavony amin'ny ratra 2 cm avo noho ny fiombon-tànana. Ny fehikibo loatra loatra dia hahatonga ny barbona hifandray amin'ny wristband ary hahatonga ny barbell hidona mora kokoa. Noho izany, amin'ny ankapobeny dia tsy voalaza fa hikasika ny felatan'ny felatan-tànana, raha toa ka afaka amboarina ny fakan'ny felaka sy ny wrist. Raha ny momba ny fitantanana ny talenta ankavia, lefony na tsy buckle araka ny fahazaran-tenanao manokana, aza dia somary taitra loatra amin'ity resaka ity. Tandremo fitsipika iray rehefa mifofofofo, te hahazo fanampiana mahery vaika ianao, ny fehin-tànana dia tokony ho tery mafy araka izay azo atao tsy mampisy fanaintainana, izay midika fa ny fehin-tànana dia tokony hisintona mafy araka izay azo atao mandritra ny dingan'ny fehin-tànana. Na izany aza, tsy takiana amin'ny toe-javatra rehetra. Ohatra, rehefa mila manatanteraka fotoam-piofanana marobe ianao dia afaka miala sasatra ny fehin-tànanao mba hahazoana antoka ny fihodinan'ny ra mivaingana.
Previous: Fanohanana ankavonana
Manaraka: Fanohanan'ny lohalika